Moz Local: Ugu Weynee Joogitaankaaga Khadka Tooska ah ee Deegaanka adoo u maraya Liis gareyn, Sumcad, iyo Maareyn Bixin | Martech Zone
Sida dadka intiisa badan wax ka baro oo ka hel ganacsiyada maxalliga ah khadka tooska ah, joogitaan toos ah oo khadka tooska ah ayaa lagama maarmaan ah. Macluumaad sax ah oo ku saabsan ganacsiga, sawirro tayo wanaagsan leh, casriyeyntii ugu dambeysay, iyo jawaabaha dib u eegista ayaa ka caawiya dadka inay wax badan ka bartaan ganacsigaaga oo badiyaa go'aamiyaan haddii ay doortaan inay wax kaa iibsadaan adiga ama qofka kula tartamaya.
Maareynta liiska, marka lagu daro maareynta sumcadda, waxay ka caawin kartaa ganacsiyada maxalliga ah inay hagaajiyaan joogitaankooda internetka iyo sumcaddooda iyagoo awood u siinaya inay maareeyaan qaar ka mid ah qodobbada ugu muhiimsan ee booqdayaasha iyo matoorada raadinta labadaba. Iyada oo ay jiraan xalal badan oo jira, waxaa muhiim ah in la tixgeliyo dhinacyada sida waxtarka, fududeynta isticmaalka, iyo qiimaha.
Iyada oo maareynta liistada otomaatigga ah iyo u qaybinta xogta goobta goobo badan oo lagu daray maareynta sumcadda, Moz Local wuxuu awood kuu siinayaa inaad si dhakhso leh u ilaaliso liisaska saxda ah, ka jawaab celinta dib-u-eegista, iyo soo-cusbooneysiinta iyo dalabyada. Qalabkeena sida ugu fudud loo isticmaalo waxaa loogu talagalay inuu kordhiyo joogitaankaaga internetka ee maxaliga ah, kordhiyo kaqeybgalka macaamilka, iyo inuu sare u qaado muuqaalkaaga raadinta maxalliga ah waqti yar iyo dadaal. Waxaa loo dhisay dhammaan noocyada shirkadaha, laga bilaabo ganacsiyada yaryar ilaa shirkadaha waaweyn, kali kali meherado badan oo meelo kala duwan ah, iyo hay'ado.
Joogtee Liisaska Saxda ah
Wixii SEO ee maxalliga ah, liisaska dhammaystiran oo sax ah ayaa muhiim ah. Haysashada cinwaanka, saacadaha hawlgalka, iyo lambarrada taleefannada iswaafajin iyo cusbooneysiin ayaa lagama maarmaan u ah raadinta iyo sidoo kale khibradda macaamiisha. Moz Local waxay kaa caawineysaa inaad si fudud u abuurto una maamusho liisaska meheradaada ee Google, Facebook, iyo bogag kale si ay uga caawiso macaamiisha inay helaan oo ay doortaan meheraddaada.
Waxaad ka cusbooneysiin kartaa dhammaan liisaskaaga hal dashbood, oo aad baran kartaa xogta, sawirrada, ama waxyaabaha kale ee loo baahan yahay si loo dhammaystiro liisaskaaga iyo astaamaha si macaamiisha ay si dhakhso leh u ogaadaan waxa meheraddaadu qabato iyo haddii ay ku habboon tahay iyaga. Liisaska waxaa si otomaatig ah loogu qaybiyaa shabakadayada lamaanaha, iyo iskudhafka liistadayada socda, liisaskaaga waxaa lagu cusbooneysiinayaa makiinadaha raadinta, tusaha internetka, warbaahinta bulshada, barnaamijyada, iyo xog ururiyayaasha waqtiga ugu yar iyo dadaal. Iyo habkayaga iswada si loo ogaado, loo xaqiijiyo loona tirtiro liisaska nuqulada ah waxay ka caawineysaa baabi'inta jahwareerka.
Moz Local sidoo kale waxay ku siineysaa tilmaamayaasha waxqabadka muhiimka ah, sida Index Index, dhibcaha joogitaanka khadka tooska ah, iyo dhibcaha dhammaystirka muuqaalka. Waxay sidoo kale kuu sheegi doontaa goorta aad tallaabo ka qaadi doonto digniino iyo ogeysiisyo loogu talagalay waxyaabaha u baahan fiiro gaar ah.
Waxaan u adeegsanaa Moz Local si aan ula soconno xaaladdeena liis gareynta, si fudud u aragno liisaska liiskeenna 'raadinta iyo fahamka waxqabadka liistada heerar kala duwan. Waxaan awoodnay inaan ku riixno macluumaadka liis garaynta oo ku socda agaasimayaasha guud waana ku faraxsanahay natiijooyinka aan aragnay.
David Doran, Agaasimaha Istiraatiijiyadda ee Oneupweb
Hubi Liisaska Ganacsigaaga Bilaash
Heerka maxalliga ah, dib u eegista ayaa sameyn kara ama jebin kara ganacsi. In ka badan 87% macaamiisha ayaa yiri waxay qiimeeyaan dib u eegista macaamiisha oo kaliya 48% ayaa tixgelin doona adeegsiga ganacsi wax kayar afar xiddigood. Xaqiiqdii, ganacsiyada yaryar xitaa kuma soo muuqan karaan natiijooyinka raadinta haddii dib u eegistooda aysan la kulmin heer gaar ah.
Dib u eegista wanaagsan ayaa kaa caawin karta kordhinta darajadaada raadinta dabiiciga ah, laakiin jawaab dhab ah oo ku saabsan dib u eegis diidmo ama isku dhafan ayaa sidoo kale horseedeysa isdhexgal badan oo lala yeesho ganacsigaaga iyo sidoo kale in la siiyo qiimeeyaha fursad ay ku beddelaan dhibcaha ay leeyihiin.
Moz Local waxay u oggolaaneysaa dadka isticmaala inay si fudud ula socdaan, u akhriyaan, ugana jawaabaan dib-u-eegista guud ahaan makiinadaha raadinta iyo degellada hal dashbood. Maareynta sumcadda ayaa muhiimad weyn u leh SEO iyo magacaaga, Moz Local-ka waxay u dirtaa cusbooneysiin iyo ogeysiis dhab ah markii dib-u-eegis cusub la soo dhejiyo. Halkaas, dashboardka ayaa kuu oggolaanaya inaad raacdo isbeddellada ku jira dib-u-eegista, soo qaadashada ereyo-fure gaar ah iyo isku celcelisyo ka muuqda dib-u-eegisyo badan. Isbeddelladani waxay bixiyaan jawaab celin qiimo leh oo ka timaadda macaamiisha waxa ay meheraddaadu si sax ah u qabanayso iyo waxa ay u baahan tahay in wax laga beddelo.
La wadaag Cusbooneysiinta & Bixinta
Ka hawlgelinta macaamiisha in ka badan dhowr ilbiriqsi ayaa maalinba maalinta ka dambaysa sii adkaanaysa. Iyada oo leh boggag kale oo badan, xiriiriyeyaal, iyo macluumaad laga helay bogga koowaad ee natiijooyinka raadinta, ka soocida tartamayaasha waa caqabad.
Waxa macaamiisha ay falceliyaan oo ay la falgalaan, hase yeeshe, waa cusbooneysiin iyo dalabyo isdaba joog ah. Ku haynta macaamiisha wax ka ogaanshaha wararka ugu dambeeyay ee ku saabsan ganacsigaaga, alaabooyinka ama adeegyada cusub, ama dalabyada gaarka ah ayaa saameyn ku yeelan kara inay kaa iibsadaan. Waxaad sidoo kale la wadaagi kartaa wararka Facebook-ga ama waxaad ku dhejin kartaa Su'aalaha & Jawaabaha meheraddaada ganacsi ee Google oo ka timid Moz Local.
Moz Local waxay kaa caawineysaa inaad si fudud u maamusho liisaska meheradahaaga iyo sumcaddaada Google, Facebook iyo bogag kale si ay uga caawiso macaamiisha inay helaan oo ay doortaan meheraddaada. Waxaa loogu talagalay in lagu kordhiyo joogitaanka internetka ee ganacsiga maxalliga ah, la kordhiyo ka-qaybgalka macaamiisha, iyo in kor loo qaado aragtida raadinta maxalliga ah iyadoo la helayo waqti iyo dadaal ugu yar.
Waxaan u helnay Moz Local inay noqoto barxad qurux badan oo gacan ka geysata kor u qaadista muuqaalka maxalliga ah ee macaamiisheenna. Iyada oo makiinadaha raadinta la shaqsiyeeyo natiijooyinka ku saleysan goobta isticmaalaha, Moz Local waxay saameyn weyn ku yeelan kartaa guud ahaan taraafikada dabiiciga ah.
Niall Brooke, Maamulaha SEO at Matalan
Waxbadan Ka Ogow Moz Local
Tags: Tilmaamaha ganacsigaururi dib u eegistatusahamaaraynta liisaskadalabyada ganacsiga maxalliga ahqiimeynta deegaankadib u eegista deegaankamozdeegaanka mozmaaraynta sumcadmadal maaraynta sumcaddamaaraynta dib u eegista